Abakhiqizi Bomshini Wokumaka Umgwaqo We-Thermoplastic I-China Umshini Wokumaka Umgwaqo We-Thermoplastic Factory & Abahlinzeki
—— Umshini Wokumaka Umgwaqo We-Thermoplastic ——
Umshini Wokumaka Emgwaqweni We-Thermoplastic Nge-Extruder
Singumkhiqizi omkhulu waseChina osebenza ngobuchwepheshe nefektri yomshini wokumaka umgwaqo we-thermoplastic ene-extruder. Kuyimishini esebenzisekayo neyenza imisebenzi eminingi, inezinga eliphakeme lokuzenzakalela, i-coefficient ephezulu yezokuphepha, ingasiza ekwehliseni ukuqina kwabasebenzi, ithuthukise ukusebenza kahle kokwakhiwa.
Singabakhiqizi abakhulu kunabo bonke baseChina bemishini yokumaka yomgwaqo eshisa i-thermoplastic. Umshini wokumaka umgwaqo we-thermoplastic uyithuluzi eliyisihluthulelo elisetshenziselwa ukwakhiwa kwe-inthermoplasticroadmarking, idinga ukusebenza ngokubambisana ne-preheater ye-thermoplastic.
Singabakhiqizi abakhulu kunabo bonke baseChina bemishini yokumaka yomgwaqo ezisebenzelayo. Isicathulo sokumaka salo mshini senziwe ngensimbi ephezulu kakhulu, engenza imigqa ihleleke, ukujiya okufanayo nokuhle kakhulu. Ummese ogxilile wokumaka isicathulo ungasetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukene zemigwaqo.
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu baseChina kanye nefektri yohlobo lokushayela lwemishini yokumaka imigwaqo e-thermoplastic (convex) eminingi. Kuyimishini esebenzisekayo neyenza imisebenzi eminingi, inezinga eliphakeme lokuzenzakalela, i-coefficient ephezulu yezokuphepha, ingasiza ekwehliseni ukuqina kwabasebenzi, ithuthukise ukusebenza kahle kokwakhiwa.
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri yomshini wokumaka umgwaqo wohlobo lwe-thermoplastic (convex). Kuyimishini esebenzisekayo neyenza imisebenzi eminingi, inezinga eliphakeme lokuzenzakalela, i-coefficient ephezulu yezokuphepha, ingasiza ekwehliseni ukuqina kwabasebenzi, ithuthukise ukusebenza kahle kokwakhiwa.
I-LXD860 Ride Kumshini Wokumaka Umgwaqo We-Thermoplastic
Singabakhiqizi abakhulu kunabo bonke baseChina bemishini yokugibela umgwaqo yohlobo lwe-thermoplastic. Ithangi lokupenda linezendlalelo eziphindwe kabili zensimbi engagqwali, engagcina ifudumele futhi ivikele ukushisa, ingasiza ukonga amandla futhi igweme ukushisa kwefomu. Umshini unenzuzo yokusebenza kahle okuphezulu, ikhwalithi ephezulu, kulula ukusebenza, futhi ilungele ukugcinwa.